Tababaraha xulka qaranka Talyaaniga Mancini ayaa ka xun in Balotelli uusan heysan koox u… – Hagaag.com
Posted on 30 Oktoobar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Tababaraha Italy Roberto Mancini ayaa sheegay Khamiistii inuu ka xun yahay in weeraryahan Mario Balotelli uusan helin koox uu u dheelo inta lagu jiray suuqa kala iibsiga, isagoo ku doodaya in weeraryahanku uu wax badan u tari karo xulka qaranka.
“Aad ayaan uga xumahay inaan arko isaga oo xaaladahan ku sugan. 30 jir ahaan, wuxuu wali ahaan karaa qaan gaar farsamo wuxuuna aad u anfici karaa xulka Talyaaniga, ”ayuu yiri Mancini, tababarihiisii ​​hore ee kooxaha Inter Milan iyo Manchester City.
“Waxaan u rajeynayaa waxa ugu fiican, waxaana rajeynayaa in waxyaabo fiican ay weli ka hor iman karaan wadadiisa,” ayuu tababaraha reer Talyaani ku sheegay wareysi uu siiyay wargeyska le Corriere dello Sport iyo Tuttosport.
Balotelli ayaa dhaliyay 14 gool 36 kulan oo caalami ah, waana ciyaartiisii ​​ugu dambeysay ee Azzurri September 2018.
Ka dib markii uu waqti la qaatay Nice iyo Marseille horyaalka Ligue 1 ee Faransiiska, Balotelli ayaa xilli ciyaareedkii hore soo badbaadiyey Brescia, laakiin wuxuu awoodi waayey inuu ka hortago in kooxda dib loogu celiyo Serie B.
Hoos u degida kooxdiisii ​​hore ee magaaladiisa ayaa ka shaqeysiisay qodob ku jira qandaraaskiisa kaasoo ka dhigay wakiil xor ah.